Uyabalisa "ngokudliwa kwefa lomyeni wakhe" - Ilanga News
Home Izindaba Uyabalisa “ngokudliwa kwefa lomyeni wakhe”
Uyabalisa “ngokudliwa kwefa lomyeni wakhe”
UBHEKENE nengwadla owesifazane waseMgungundlovu othi “udlelwa” amakotishi awu-7 omyeni wakhe ngumashonisa ongusayitsheni wamaphoyisa emuva kokuba umyeni wakhe wayebambise ngawo ukuze kuhlangane isikweletu sika-R80 000 ayesenzile, kodwa manje uthi iphoyisa selishaya phansi ngonyawo ukuwabuyisela.
UNkk Masho Ngubane (osesithombeni), uMaShange (52), uthi uyoyizekela amagwababa echobana eyokuthathelwa emini kwabha, izindlu zomyeni wakhe, uMnu Bongani Ngubane (ongasekho) ngumuntu owazi kahle ngokusebenza komthetho okumele ngabe nguyena owuhloniphayo.
Uthi leli phoyisa elinguMnu Khiniza Khanyile, selitshele iziqashi ukuthi uma zingayifaki imali (ewu-R2 800 umuntu emunye) yerenti kwi-akhawunti yalo, zizozisola ngoba yilona eselengamele amakotishi.
Ekhuluma neLANGA uNkk Ngubane, uthe ngo-2017 umyeni wakhe waba nenkinga kwezemali waze wangena komashonisa.
Uthi wahlangana noMnu Khanyile ongusayitsheni esiteshini samaphoyisa esiseMgungundlovu, waboleka u-R80 000 ukuphesha okwakumxakile.
“Kwathi uma umyeni wami ebona ukuthi uyahluleka wukukhokhela uMnu Khanyile, esefuna nokuzibulala ngenxa yokhwantalala, ngangenelela, ngamcebisa ngokuthi makenze isivumelwano naye (uMnu Khanyile) sokubambisa ngamakotishi ethu aseHoneville ukuze imali yerenti iye kuyena.
“Sazibala izinyanga sathola ukuthi ngo-2019 izobe seyihlangene imali kaMnu Khanyile bese amakotishi ebuyela kithina. Samnikeza netayitela ukuze abone ukuthi kasimgili ngalesi sivumelwano sokukhokhelana imali yerenti.
“Umyeni wami washona ngo-2018, ngathula ngalinda u-2019 wokubuya kwamakotishi, okuyilapho kwaqala khona izinkinga,” kuchaza uNkk Ngubane.
Uthi unikele kuMnu Khanyile ekupheleni kuka-2019 eyomkhumbuza ngokubuyela kwamakotishi kuyena njengoba nezinyanga zasezeqile, kodwa bangezwana, wamkhomba kummeli wakhe ethi makayokhuluma naye.
“Kungixakile ukuyiswa kummeli ngoba kwakuvunyelwene ngesihle. Ngakhuluma nommeli ngamcela ukuba angihlanganise noMnu Khanyile kodwa lutho.
“Ngaya eziqashini ngiyozinikeza i-akhawunti yasekhaya, zangitshela ukuthi uMnu Khanyile uzisabisile wathi nguyena umnikazi wamakotishi ngakho imali yerenti izonikwa yena.
“Usakhe ezinye izindlu endaweni yethu waqashisa nabasePakistan asebenezitolo lapho. Ingihlukumeza kakhulu eyokudliwa kwefa lomyeni wami njengoba sengihlupheka nezingane, sesiphila ngemali yesibonelelo sazo,” kusho uNkk Ngubane.
Ethintwa yiLANGA uMnu Khanyile, uthe ngeke aphawule lutho kulona ngoba lalingekho kuvunyelwana, malixhumane nommeli wakhe.
“Ngicela ubuye ungithinte ukuze ngikunikeze izinombolo zommeli nomgwaqo wehhovisi asebenzela kulona,” kusho uMnu Khanyile.
ILANGA selibuyela kuyena, ulitshele ukuthi malixhumane noNkk Ngubane, akusekho lusizo azolunika leli phephandaba.
Ummeli, uNkz Celine Naidoo, uthe impela uMnu Khanyile yikilayenti lakhe kodwa akukho azokukhuluma neLANGA ngoba ikilayenti lakhe belingamtshelanga lutho ngokuzofunwa yilona kuyena.
UMnu Zazi Nxele okhulumela ihhovisi leMeya yaseMsunduzi, uMnu Mzimkhulu Thebolla, uthe bewumasipala kabakwazi ukungenelela ngoba kwakuvunyelwene ngasese ngakho wumthetho ozokwazi ukuxazulula.
Ucele uNkk Ngubane athole izeluleko zomthetho kulolu daba.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, weluleke abakwaNgubane ngokuthi bathole ummeli ngoba lolu wudaba lombango.
Previous articleUvula ngekusasa lemidlalo yePSL
Next articleKufe uthisa esikhungweni sokumaka